सावधान: हाे'टलका साउजीले नै कुखुराकाे खाेरमा लागेर एस्तो गरे, मिडियाको अगाडि दुवैजनाले खोले सबै रहश्य !! [ पुरा भिडियोसहित ] - Babal Khabar
सल्यानमा एक जना १४ वर्षकी बालिकालाई गरिबिको फाइदा उठाउँदै होटल संचालकले काम लगाइदिने बहानामा करणी गरेका छन् । साँझको समयमा घरवाटै लिएर गएका होटल संचालकले घरमा नपुग्दै बाटोमै करणी गरेको बालकाले बताएकी छन् ।
म जान्न भन्दा भन्दै केही हुँदैन होटलमा काम गर्ने हो भन्दै मोटरसाइकलमा लिएर गएका थिए । तर बिच वाटोमै पुगेपछि उनले होटलमा होइन कुखुरा फाराममा काम गर्ने हो भन्दै जंगल तर्फ लिएर गएको बालिकाले बताएकी छन् । सल्यान श्रीनगर स्थित रोयल गेस्ट हाउसका संचालक हिमराज बुढाथोकीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अहिले गाउँ भरीका सबै लागेर उनीहरुलाई पैसा लिएर मिल्न दवाव दिइरहेको बालिकाले बताएका छन् । आफ्नै परिवारका सदस्य पनि पैसा लिएर मिल्नुपर्छ भन्दै आएको उनीहरुको भनाई छ । एक जना हाम्रा फुपाजु पैसामा मिल्नुपर्छ भन्न आउनुभयो, बालिकाले भनेकी छन् ! *** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
उनीहरुबाट २ लाख लिएर एक लाख हामीलाइ दिने एक लाख आफुले राख्ने भनेर कुरा गर्न आउनु भएको थियो भएको थियो । बुढाथोकीको श्रीमतीले पनि आफुलाई बोलाएर मिल्न दवाव दिएको किशोरीको भनाई छ । गरिबिको फाइदा उठाउँदै गाउँका अगुवाहरु नै मिल्न दवाव दिएको बालिकाले गुनासो गरेकी छन् । बुढाथोकीको परिवारले अहिले पी डित परिवारलाइ बारम्बार फोन गरेर र भेटेर पैसामा कुरा मिलाउन दबाब दिएको खुलेको हो । त्यस्तै पीडित बालिकाकी दिदिलाइ पनि आरोपित होटल संचालककी श्रीमतीले भेटेर पैसामा मिल्न बबाद दिएको उनले बताइन् । यो सँगै श्रीनगरमा होटल संचालकका नजिकका अन्य व्यक्तिहरुले पनि घटनालाइ पैसामा मिलाउन विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको बताएकी छन्। सल्यानमा एक जना १४ वर्षकी बालिकालाई गरिबिको फाइदा उठाउँदै होटल संचालकले काम लगाइदिने बहानामा करणी गरेका छन् ।
साँझको समयमा घरवाटै लिएर गएका होटल संचालकले घरमा नपुग्दै बाटोमै करणी गरेको बालकाले बताएकी छन् । म जान्न भन्दा भन्दै केही हुँदैन होटलमा काम गर्ने हो भन्दै मोटरसाइकलमा लिएर गएका थिए । तर बिच वाटोमै पुगेपछि उनले होटलमा होइन कुखुरा फाराममा काम गर्ने हो भन्दै जंगल तर्फ लिएर गएको बालिकाले बताएकी छन् । सल्यान श्रीनगर स्थित रोयल गेस्ट हाउसका संचालक हिमराज बुढाथोकीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । तर अहिले गाउँ भरीका सबै लागेर उनीहरुलाई पैसा लिएर मिल्न दवाव दिइरहेको बालिकाले बताएका छन् । आफ्नै परिवारका सदस्य पैसा लिएर मिल्नुपर्छ भन्दै आएको उनीहरुको भनाई छ । *** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
यो सँगै श्रीनगरमा होटल संचालकका नजिकका अन्य व्यक्तिहरुले पनि घटनालाइ पैसामा मिलाउन विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको बताएकी छन्। एक जना हाम्रा फुपाजु पैसामा मिल्नुपर्छ भन्न आउनुभयो, बालिकाले भनेकी छन्, उनीहरुबाट २ लाख लिएर एक लाख हामीलाइ दिने एक लाख आफुले राख्ने भनेर कुरा गर्न आउनु भएको थियो ।बुढाथोकीको श्रीमतीले पनि आफुलाई होटलमै बोलाएर मिल्न दवाव दिएको किशोरीको भनाई छ । गरिबिको फाइदा उठाउँदै गाउँका अगुवाहरु नै मिल्न भन्दै आफुहरुलाई दवाव दिन आएको भन्दै बालिकाले गुनासो गरेकी छन् । बुढाथोकीको परिवारले अहिले पी डित परिवारलाइ बारम्बार फोन गरेर र भेटेर पैसामा कुरा मिलाउन दबाब दिएको खुलेको हो ।
Prevअहिलेसम्मकै अनौठो: ज्योतिषीले महिलाको स्त’न समातेर भ’विष्य बताइदिएपछी सबैको होस उड्यो !! (भिडियो हेर्नुहोस)
nextएक जोडि जंगलमै एस्तो अवस्थामा रङेहात पक्राउ, भिडियो बन्यो सर्वत्र भाईरल !! (भिडियो हेर्नुहोस्)